केपी ओलीले अब बालुवाटारबाट बाहिरिने तयारी गरे हुन्छ: माधव नेपाल
ओलीले अब बालुवाटारबाट बाहिरिने तयारी गरे हुन्छ: माधव नेपाल
१ माघ २०७७, बिहीबार १५:४९
काठमाडौं — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधब समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिन खुट्टा उचालेर बस्दा हुने बताएका छन् ।
नेपाल बुद्धिजीवी संगठनद्वारा आयोजित प्रतिनिधिसभा विघटनः प्रतिगामी कदम विषयक अन्तरक्रिर्या कार्यक्रममा उनले भने– ‘काम चलाउ प्रधानमन्त्री मात्र अब उहाँ प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिन खुट्टा उचालेर बस्दा हुन्छ ।’ कार्यक्रममा केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिबाट मुलुक पिल्सिएको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँको तानाशाही प्रवृत्तिबाट कसैले चिच्याउनु पनि पाउनु भएको छैन । हामी निसासिएपछि हामी बोल्न बाध्य भएका हौ । उहाँले आफ्नो पार्टीसँगै प्रतिपक्षीको पनि मान मर्दन गर्नुभएको छ ।’
कार्यक्रममा उनले भने, ‘केपी ओलीले सडक छाप होइन, धुलोछाप पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ मदन भण्डारी फाउन्डेशन मात्र छ । त्यहाँ पार्टी छैन।’ ओलीमाथि थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको र आजको बैठकमा गम्भीर छलफल हुने नेपालले बताए । उनले संवैधानिक ‘कू’ भएकाले चुनावको कुरा गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘संवैधानिक ‘कू’ गरेका बेला चुनावको कुरा हुँदैन । अदालतबाट सच्याउनुपर्छ । अन्तिममा त जनअदातल छँदैछ । उहाँले बैशाखमा चुनाव गराउनका लागि घोषणा गर्नुभएको छैन ।’ अहिलेको अवस्था आउनुमा ओलीको ९९ प्रतिशत गल्ती रहेको वामदेव गौतमले नै भनेको उनले बताए ।’
केपी ओलीबाट नभएको प्रचण्डबाट भएको उनले बताए । ‘म प्रचण्डसँग गएको भनिएको छ । त्यो होइन । हिजो प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ । हामी दुबै जना समान अध्यक्ष हौँ । यसअघि स्थायी समिति बैठकको नेतृत्व मैले गरेँ । म पहिलो अध्यक्ष भएँ । अब प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो कुरा केपी ओलीबाट भएन । आज प्रचण्डबाट भएको छ। अब भन्नुहोस् को राम्रो ?’नेपालको भनाई थियो ।
प्रेम दिवसः यस्तो छ ‘भ्यालेनटाइन डे’बारे रोचक कथा
काठमाडौं — भनिन्छ प्रेममा न भुगोल हुन्छ न जात नै न बाधा हुन्छ । प्रेममा
सत्यमोहन जोशी दम्पतीले मरणोपरान्त शरीर दान गर्ने
काठमाडौं — शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी पत्नी राधादेवी जोशीले मरणोपरान्त आफ्नो शरीर दान
संसद विघटनको विरोधः हातमा साङ्लो बाँधेर स्रष्टाहरु गरे प्रर्दशन
काठमाडौं — स्रष्टा र कलाकारहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । मण्डला
संविधानको रक्षाका लागि उपराष्ट्रपति पुनले गरे यस्तो आह्वान
काठमाडौं — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान रक्षाका लागि सबै नेपालीलाई सांकेतिक आह्वान गरेका छन् ।
विश्वलाई लोभ्याउने ‘नीलो ताल’को मनमोहक दृश्य (फोटो फिचर)
ए ‘भ्यालेन्टाइन डे’ तिमीले गर्न खोजेको के ?
कविता – भ्यालेन्टाइन ‘डे’ ए ‘भ्यालेन्टाइन डे ‘ तिमीले गर्न खोजेको के ? सारा युवा
अल्बर्ट आइन्स्टाइनः जसको दिमागले संसार जाग्यो
काठमाडौं — अल्बर्ट आइन्स्टाइन विश्वप्रख्यात वैज्ञानिक हुन् । भौतिक शास्त्रमा उनले प्रतिपादन गरेका सुत्रहरुलाई विज्ञानको
©2021 Mobile Pati Online मोवाईल पाटी प्रा. लि.